Misaa'elli finciltoonni Yaman Riyaaditti dhukaasan 'mallattoo Iraan' ofirraa qaba - BBC News Afaan Oromoo
Miidiyaan warra Huutii suuraa misaa'ela Sa'uudiitti dhukaasanii mul'isan
Misaa'ela Yaman magaalaa Sa'uudii Arabiyaa, Riyaaditti dhukaaste keessa meeshaaleen waraanaa Iraan dhiyeessite akka jiru Dhaabbata Mottummoota Gamtoomaniitti Ambaasaaddarri Yunaayitid Isteetis Nikii Helii dubbatan. Gochi akkasii addunyaa gara waraana hamaatti oofaa jiraachuu mul'isas jedhaniiru.
Misaa'elichi Kibxata loltoota Sa'uudii Arabiyaatiin qilleensarratti haleelamee kan kufe ta'us, hanga ammaatti garuu midhaan qaqqabe hin gabaafamne.
Iraan gama isheetiin riphee loltoota Huutii kan mootummaa Yamanii fi Sa'uudii Arabiyaatiin lolaa turan hin hidhachiisne jechuun haalteetti.
Akka gabaasa Televiziyoona warra Huutii Al Masiraatti , misaa'elli Burkan H2 jedhamu kun kan inni irratti qiyyaafate masaraa mootummaa Riyaad irratti.
Mana Maree Nageenyaa Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii kan New Yoorki jiru tuquun yaada kan kennan Ambaasaaddar Nikii Helii ,misaa'elichi kan duraan Iraan waaraana keessatti itti fayyadamaa turteen wal fakkaata jedhan.
''Yakka mootummaa Tahraan saaxiluuf qindoominaan hojjechuu feesisa, ergaan kun akka bira ga'uuf waan barbaachisu ni hojjenna. Kana hin goonu taanaan Iraan addunyaa naannawa kanaa waraana hammaataa keessa galchuu malti'' jedhan.
Tarkaanfiiwwan manni marechaa Tahraan irratti fudhachuu malu hedduu lafa kaa'anis, michuun Iraan Raashiyaan garuu akka hin deggerre beeksisteetti.
Gabaasni marsariitii Al Masiraa ,haleellaan kun yakka hammaataa Ammerkaa fi Sa'uudiin qindaa'anii ummata Yaman irratti raawwataniif deebii kennuuf jedha.
Misaa'elichi walga'ii aanga'oota Sa'uudii Masaraa al-Yamaam kan magaalaa Riyaaditti argamutti gaggeeffamaa turerratti kan xiyyeeffateedha jedha gabaasi miidiyaa kanaa. Walga'icharratti mootichi Sa'uudii Muhaammad bin Salmaan baajata waggaarratti gabaasa dhiyeessuuf eegamaa turan.
Masaraan kun teessoo waajjira mootichaa fi mana murtii biyyattiiti.
Daqiiqaa muraasa booda Televiziyoonni mootummaa Sa'uudii Al Ikbariyyaa jedhamu misaa'elichi naannawa kibba magaalattiitti qilleensarratti rukatamee kufuusaa gabaase.
Viidiyoowwan marsariittiirratti gadi dhiifaman hurrii adii magaalattiirra bololi'aa turee fi sagalee dhowiinsaati.
Madda suuraa, Almasirah
Riphee loltoonni Huutii misaa'ela Burkan 2 Guraandhala 2017 keessa mul'isan
Aanga'oonni Sa'uudii akka jedhanitti qilleensarratti rukutamu misaa'ela kanaa keessatti Ameerkaan meeshaalee teekinooloojiitiin deggerteetti. Xiinxaltoonnimmoo erga akkas ta'ee silaa misaa'elli balaa guddaa uumuu danda'u kun terminaala Sa'uudii isa guddichatti siqee kufuu hin qabu jedhu.
Torban darbe, Nikii Halii haftee misaa'elaa ji'a darbe Riyaaditti dhukaafame ifoomsan
Sa'uudii Arabiyaan waraana waliinii ollaasheetti gaggeeffamaa jiru keessa kan seente bara 2015 ture. kaayyoon Sa'uudii deggersa mootummaan Iraan riphee loltoota Huutiif taasisaa ture laaffisuu yoo ta'u Iraan garuu deggersa kamuu taaisaa akka hin jirree fi misaa'ela darbatames Yamantu of danda'ee weerara Sa'uudii ofirraa qolachuuf jecha dhukaase jetteetti.
erga waraanni Yaman eegalee namoonni 8,670 ta'an du'anii, kuna 50tti kan siqan ammoo madaa'aniiru jedha gabaasi Mootummoota Gamtoomanii.
Viidiyoo, Sa'uudi Arabiyaa keessatti maltu ta'aa jira
Nama ganna 32 fi ilma mootii kan ta'an Mohaamad bin Salmaan dureeyyi fi ilmaan moototaa hoogantoota gurguddoo Saa'udii malaamaltummaan yakkanii to'anno jala erga oolachanii bubbuleera.